Isiphakamiso sokuqala soRhulumente waseMerika oMkhulu
I-Albany Plan yeManyano yayisisiphakamiso sangaphambili sokulungiselela ii -coloni zaseMerika zaseBrithani phantsi koorhulumente oyintloko. Nangona ukuzimela ngaphandle kweBrithani enkulu kwakungekho injongo yalo, i-Albany Plan yayimela isiluleko sokuqala sokuvunyelwa ngokusemthethweni ukuhlela ii-coloni zaseMerika phantsi kolawulo olulodwa, oluseburhulumenteni.
Ngeli xesha lingazange liphunyezwe, iSicwangciso seAlbany samukelwa ngoJulayi 10, 1754 yiAlbany Congress, kwindibano eya kuba ngabameli bee-7 kwii-coloni zaseMelika.
Iikholoni zaseMaldin, ePennsylvania, eNew York, e-Connecticut, e-Rhode Island, eMassachusetts naseNew Hampshire zithumele ikhomishinala kwiikhosi.
Urhulumente waseBrithani ngokwawo wayeyalele ukuba i-Albany Congress ihlangane ngokuphendula kwiingxoxo ezingapheliyo zentetho phakathi koorhulumente waseKapa kunye neSizwe saseMahawk, ngoko ke inxalenye ye-Iroquois Confederation enkulu. Eyona nto, iBrithani yaseBrithani inethemba lokuba iAlbany Congress iya kubangela umnqophiso phakathi koorhulumente bamaKoloni kunye ne-Iroquois ngokucacileyo ichaza umgaqo-nkqubo wokusebenzisana kwama-colonial-Indian. Ebona ukuqinisekiswa kweMfazwe yaseFransi neyamaNdiya ezayo, iBrithani ibone ukubambisana kwe-Iroquois ukuba kubalulekile ukuba iikoloni zisongelwe yimpikiswano.
Ngoxa umnqophiso kunye ne-Iroquois usenokuba ngumsebenzi wabo oyintloko, abathunywa bekolonial baxubusha nezinye izinto, njengokwenza umanyano.
Isicwangciso sikaManyano kaBenjamin Franklin
Ngaphambi kokuba i-Albany Convention, icebo lokugxininisa ama-colonies aseMelika ibe "imanyano" yayisasazwe. Umxhasi obalaseleyo welo mbutho woorhulumente beenkoloni nguBenjamin Franklin wasePennsylvania, owaye wabelana ngeengcamango zakhe ngokubambisana nabanye abalingane bakhe.
Xa wafunda ngendibano ye-Albany Congress, uFranklin washicilela i-cartoon ye-Political Gazette ethi "Joyina, okanye Die". I-cartoon ibonisa isidingo semanyano ngokuthelekisa ama-coloni ukuba ahlule imizimba yenyoka. Ngokukhawuleza xa ekhethwe njengomthunywa wePennsylvania kwiNgqungquthela, uFranklin washicilela ikopi yento awabiza ngokuba "ngamafutshane amacandelo kwiplani yokudibanisa i-North Colonies" ngenkxaso yePalamente yaseBrithani.
Enyanisweni, urhulumente waseBrithani ngelo xesha wayecinga ukuba ukubeka iikholoni phantsi kolawulo olufutshane, olusetyenjini kuya kuba luncedo kwiConcer ngokukwenza kube lula ukulawula kwabo kude. Ukongezelela, inani elikhulayo labakholoni livisisana nemfuneko yokulungelelanisa ukwenzela ukukhusela kangcono iminqweno yabo efanayo.
Emva kokuhlanganisana ngoJuni 19, 1754, iindwendwe eziya kwi-Albany Convention zavotela ukuxoxa nge-Albany Plan yomanyano ngoJuni 24. Ngo-Juni kaJuni 28, ikomiti yenyunyana yenyunyana yabonisa isicwangciso soyilo kwiNkontileka epheleleyo. Emva kwengxoxo enkulu kunye nokulungiswa, inguqu yokugqibela yamkelwa ngoJulayi 10.
Ngaphantsi kwe-Albany Plan, oorhulumente beenkoloni, ngaphandle kwalabo baseGeorgia naseDelaware, babeza kumisela amalungu "kwiGosa eliKhulu," ukuba lijongelwe "ngumongameli Jikelele" aqeshwe yiPalamente yaseBritani.
I-Delaware yayingekho kwi-Albany Plan kuba yona kunye nePennsylvania yabelana ngurhulumente omnye ngexesha. Izazi-mlando ziye zacinga ukuba iGeorgia yayingabandakanywa ngenxa yokuba, ukuba ithathwa njengengxowankulu "yombombo," yayingeke ikwazi ukunikela ngokulinganayo ngokukhuselekileyo nokuxhasa imanyano.
Ngoxa iindibano zendibano zavunywa ngokuvumelana kwesiCwangciso saseAlbany, ama-legislatures azo zonke iikholoni ezisixhenxe zaligatya, kuba zaziza kuthatha ezinye zamandla azo. Ngenxa yokurhatywa kwamalungu omthetho we-colonial, iSicwangciso se-Albany asizange sithunyelwe kwiNkundla yaseBrithani ukuvunyelwa. Nangona kunjalo, iBhodi yaseBrithani yoRhwebi ithathelwe ingqalelo kwaye iyakunqanda.
Emva kokuba uthumele uGeneral Edward Braddock, kunye nabakomishinala ababini, ukuba banakekele ubudlelwane bamaNdiya, urhulumente waseBrithani ukholelwa ukuba unokuqhubeka nokulawula iikholoni zaseLondon.
I-Albany Isicwangciso sikaRhulumente esiya kusebenza
Ukuba iSicwangciso seAlbany samukelwa, amasebe amabini karhulumente, iGosa eliMkhulu kunye noMongameli Jikelele, babe nosebenza njengombuso onobunye onoxanduva lokujongana neengxabano kunye nezivumelwano phakathi kwamakoloni, kunye nokulawula ubudlelwane kunye nobuvumelwano be-colonial kunye namaNdiya. zizwe.
Ekuphenduleni ukutyeba kwixesha lolawulo lwama-colonial oluqeshwe yiPalamente yaseBrithani ukuba liwonge ngaphezu kwee-legislators ezikhethiweyo ngabantu, iSicwangciso se-Albany siya kunika iGosa eliMkhulu amandla angaphezulu kunomongameli Jikelele.
Isicwangciso saye saye savumela ukuba urhulumente omanyeneyo onokumanyanzelisa nokuqokelela irhafu ukuxhasa imisebenzi yayo kwaye anikezele ukukhusela imanyano.
Nangona i-Albany Plan yahluleka ukwamukelwa, amaninzi amanqaku ayo yakha isiseko soburhulumente base-Amerika njengoko kubhalwe kwiiNdibano zeNkomfa kwaye, ekugqibeleni, uMgaqo-siseko wase - US .
Ngomnyaka we-1789, unyaka owodwa emva kokugqitywa kokugqibela komGaqo-siseko, uBenjamin Franklin wacebisa ukuba ukuphunyezwa kweClani yaseAlbany kunokubambezela kakhulu ukuhlukana kobuKoloni nase- American Revolution .
"Ngoku kucamngca ngoku kubonakala ngathi kunokwenzeka, ukuba ukuba iPlani elandelayo [i-Albany Plan] okanye into enjengeyo, yamkelwe kwaye yaqhutyelwa ekusebenziseni, ukuHlukana kwaMaKoloni okuvela kuMama weMama kungekudala kungekudala, nokuba Izinto ezimbi zenzeke kuzo zombini zenzeke, mhlawumbi kwenye i-Century.
Kuba amaKoloni, ukuba bebonke bebumbene, bebeya kuba njalo, njengoko bazicingela ngokwabo, banele ngokwabo ukuKhusela, kwaye bathemba nabo, njengokuba iSicwangciso, i-Army evela eBrithani, kuba loo nto yayingeyomfuneko: Ama-pretenses okwakhiwa kweTampamp-Act ayengayi kuba khona, okanye ezinye iiprojekthi zokudweba iNgeniso evela eMelika ukuya eBrithani yiZenzo zePalamente, eyayiyimbangela yoPhule, kwaye yayihamba nelo xesha elibi kakhulu Igazi leNgcaciso: ukuba iiNgxenye ezahlukeneyo zoMbuso zisenokuba zihlala kwiXolo kunye noManyano, "kubhala uFranklin.
Imbali emfutshane yovavanyo lwe-Salem Witchcraft
Kutheni i Lewis kunye neClark Expedition ewela eNyakatho Melika?
I-Webster-Ashburton Treaty ka-1842
Ubundlobongela bamapolisa kunye noGonyamelo kunye neBlackLivesMatter
Biomes Intaba: Ubomi Kwiindawo eziphakamileyo
Isakhono seZiseko soPhulo lwezemfundo
Iilwimi zaseJapan ezincedo
Uluhlu lwee-52 zase-US zase-Insects
Epreli Izihloko, i-Holiday Activities, kunye neMicimbi yabaFundi abaQalayo
IiKholeji zeeNtshonalanga zeeNtshonalanga neeNyuvesi